एउटा घटना, जसले यमलाललाई सर्प संरक्षक बनायो – Saurahaonline.com
एउटा घटना, जसले यमलाललाई सर्प संरक्षक बनायो
सौराहा अनलाइन | २०७६, २५ भाद्र बुधबार
चितवन : संयोगले सर्प समात्न पुगेका यमलाल भण्डारीले सर्प संरक्षक बनुला भन्ने सोचेकै थिएनन् । तर, ४ वर्ष अघिको एउटा घटनाले उनलाई सर्प संरक्षकका रुपमा स्थापित गराउन थालेको छ । चितवनको लकुंका ४० वर्षीय भण्डारीले वस्ती वरीपरी देखिने सर्पको उद्धार गरी सुरक्षित ठाउँमा लगेर छाडिदिन्छन् । सर्पको उद्धारको थालनी उनी यसरी सम्झिन्छन् ।
भण्डारीले जसरी सर्प उद्धार गर्दै हिँड्न त टाढाको कुरा, मानिसहरु नजिक पर्न डराउँछन् । सर्प समात्ने सबैका आ आफै तौरतरिका छन् । कतिले पढेर जानेका छन् । कतिलाई अनुभवले सिकाएको छ । लकुंमा पार्टी प्यालेस चलाउँदै भण्डारीसँग पनि सर्प समात्ने आफ्नै तरिका छ ।
नेपालमा वर्षेनी विषालु सर्पले डसेर धेरैको ज्यान जाने गरेको छ । घरवरीपरी सर्प देखिने बित्तिकै मार्ने गरेको पाइन्छ । तर, चोट नपुर्याए र नजिस्क्याए सर्पले मानिसलाई केही नगर्ने विज्ञ बताउँछन् ।
विज्ञका अनुसार सर्प आफैंमा विषालु हो, तर यसले पृथ्वीमा रहेका अन्य धेरै विषालु जीवलाई खाइदिन्छ । जसले मानव जातीलाई टेवा पुग्छ । यसै कारण आफू पनि सर्प संरक्षणमा लागेको भण्डारी बताउँछन् ।
ज्यानै जान सक्ने जोखिमपूर्ण काममा परिवारको साथ पाउने कुरै भएन । आमा र श्रीमतीलाई पनि भण्डारीले सर्प समात्दै हिँडेको कत्ति मन परेको छैन । तर, सर्पको उद्धारमा भण्डारीलाई सन्तुष्टि मिल्ने गरेको छ ।
विषालु सर्पका कारण आम मानिसलाई जति जोखिम हुन्छ त्यति नै सर्प संरक्षकलाई पनि हुन्छ । परिवारको चिन्तालाई वेवास्ता गरेर हिँडेका भण्डारी पनि सर्प उद्धारको क्रममा बालबाल बँचेका छन् । त्यसैले सर्प उद्धार गर्न पूर्व उनले परिस्थितिको राम्रोसँग अध्ययन गर्छन् ।
घरवरीपरी देखिएका सर्पलाई सुरक्षित तरिकाले उद्धार गरी वस्तीको टाढा लगेर छाड्ने सकिन्छ । डराएर मार्नुको सट्टा सर्पमैत्री वातावरण बनाएर आफू पनि जोगिदै सर्पलाई पनि जोगाउन सकिन्छ । कस्ता सर्पलाई कसरी समात्ने ? भण्डारी भन्छन् ।
पछिल्लो ४ वर्षमा भण्डारीले ११२ वटा सर्प मानिसको घरबाट उद्धार गरी जंगल तथा वस्तीदेखि टाढा लगेर छाडिदिएका छन् । ति मध्ये केही विषालु सर्प पनि उनले समाए । विषालु सर्पका कारण हुने जोखिम न्युनिकरण गर्दै आएका भण्डारी जस्ता सर्प संरक्षक सबैतिर पहुँचमा हुँदैनन् । अब घर वरीपरी सर्प देखे आम सर्वसाधारणले के गर्ने ?
उद्धार र संरक्षणको अभियानमा लाग्दै गर्दा भण्डारी सर्पका व्यवहारसँग पनि नजिकिँदै गएका छन् । कुन सर्प कस्तो भन्ने उनले सजिलै पहिचान गर्न थालेका छन् । विषालु सर्प चिन्ने उनको यस्तो तरिका छ ।
गाउँ टोलमा भेटिने सर्पका कारण मानिसमा त्रास बढ्ने गरेको पाइन्छ । भण्डारीले चितवन जिल्लाभरी स्वयंसेवकका रुपमा मानिसका घरमा भेटिने सर्पका उद्धार गर्ने गरेका छन् । तर, यस्तो जोखिमपूर्ण काममा राज्यले पनि सघाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सर्पको उद्धार सहज छैन । लहलहैमा लागेर सर्प समात्न खोज्दा दुर्घटना हुनसक्छ ।
त्यसैले अध्ययन गरी सावधानीपूर्ण तरिकाले मात्र सर्प समात्न भण्डारीको सुझाव छ । विश्वमा हालसम्म पन्ध्र परिवारअन्तर्गत करीब २ हजार ९ सय प्रजातिका सर्प पाइएका छन् ।
त्यसमध्ये नेपालमा करिब ८० देखि ८९ प्रजातिका सर्प पाइन्छ भन्ने जीवशास्त्री हरूको अनुमान छ । संसारमा पाइने करिब २ हजार ९ सय प्रजातिका सर्पमध्ये केवल ७ सय ५० मात्र विषालु छन् ।
अझ त्यसमा पनि केवल २ सय ५० प्रजातिका सर्प मानिसका लागि खतरनाक मानिन्छन् । नेपालमा पाईने सर्प मध्ये २० प्रजाति मात्र विषालु हुन्छन् ।
अझ त्यसमा पनि कोब्रा, करेत र दुई प्रजातिका भाइपर गरी केवल चार प्रजातिका सर्प मात्र मानिसका लागि खतरनाक मानिन्छन् । त्यसैले सर्प देख्नासाथ त्रसित हुनु आवश्यक छैन तर सतर्क भने हुनैपर्छ ।
कालिका मन्दिर निर्माणको लागि एकैदिनमा उठ्यो करिब साढे ५ लाख २०७६, ९ फाल्गुन शुक्रबार
यात्रा ग्रुप भरतपुरको अध्यक्षमा पुन: कृष्ण कार्की २०७६, ९ फाल्गुन शुक्रबार
तनहुँ : देवघाट ५ कृषि संकलन केन्द्र एवं हाट बजारमा आज श्री कालिका मन्दिर सस्थाले आयोजना गरिएको कालिका मन्दिर.....
यात्रा ग्रुप भरतपुरको अध्यक्षमा पुन: कृष्ण कार्की